China High Transparent Biodegradable POF kupisa shrink firimu Jumbo roll fekitori uye vagadziri | GS PACK
Yakakwira Transparent Biodegradable POF kupisa shrink firimu Jumbo roll
PVC SHRINK FILM (Polyvinyl Chloride) ndiyo yakajairika shrink firimu mhando mumusika izvozvi. Kudhinda giredhi shrink firimu ndeimwe mhando yezvoupfumi kurongedza zvinhu zvine mhando yakanaka iyo inoshandiswa zvakanyanya mumarudzi ese ekupakata indasitiri, senge chikafu, chinwiwa uye kumwe kushandiswa kwezuva nezuva.
Pvc ndeye yakakwira density firimu iyo inodzikira pane yakaderera tembiricha masheji. Iyo inowanzo shandiswa shrink sleeve zvinhu zvemusika.Iine yakanakisa shrinkage mitengo, kujekesa, kudhinda mhando, uye huwandu hwakawanda hweese ari maviri ekudzikira tembiricha uye shrink ratios. yakakwira simba kwesimba yekuwedzera mamiriro ekunze kusagadzikana.Iyi scuff inodzivirira shrink sleeve zvinhu ine yakaderera mutengo.
Ukobvu (um / Gauge)
Polyolefin Shrink Firimu (POF) parizvino ndiyo inonyanya kushandiswa kudzikira zvinhu zvekutakura, Iwo makuru maficha eiyo Polypropylene (PP) uye Linear Low DensityPolyethylene (LLDPE).
Izvi zvinhu hazvisi-zvine chepfu uye hazvinhuhwi zvakatipoteredza zvine hushamwari mhando (POF) 5-Layer Co-extruded Polyolefin Shrink Firimu inogadzirwa nekambani yedu inoonekwa neakakwira constriction ratio (inopfuura 60%), zvine mwero mweya wedziviriro pfuma, inoshanduka kugadzikana uye hermetic yekuisa chisimbiso pfuma, yakaderera-tembiricha kuramba, isiri-brittle, nyoro-chiratidzo uye anti-static.Iyo inokodzera otomatiki kana semi-otomatiki shrink pack pack michina.
Iwo makuru maficha ePOF yekupakata firimu:
1. Shrinkage rate: crosswise 20% - 30%, kureba 65% - 75%.
2. Yakakwirira inopenya, yakajeka kujekesa, Perfact Kushongedza mashandiro.
3. Flexible performance yakanaka, inovandudzwa pasi peLat temprature, Kwete nyore kukwegura.
4. Iyo yakaderera density yeiyo POF Shrink Firimu Inogona nenzira kwayo kudzikisira mutengo wekutakura.
5. Kuchengetedza kwekushisa kunoshamisa, kusimbisa strenth kumusoro.
6. Tensile, kuramba kubaya kuita kwakanaka.
7.Shandisa renji, inogona kushandisa mune semi-otomatiki, otomatiki kumhanya-kumhanyisa michina yekupakira uye yekurongedza manyore.
Pashure: Tsika 10-35 microns eco-inoshamisira epurasitiki pof thermo shrink yekuputira firimu
Pof Heat Shrink Firimu
Pof Heat Shrink Firimu Chinhu
Polyolefin Heat Shrink Firimu
Shrink Kuputira Firimu Rolls, Shrink Firimu Pvc, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Polyolefin Pof Shrink Firimu, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira,